NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 845
Mahanoro : trano miisa 30 ravan’ny afo
Par Taratra sur 07/11/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nijoalajoala indray ny afo tao amin’ny fokontany Antanamborozano Mahanoro, ny asabotsy antoandro tamin’ny 11 ora. Trano miisa 30 mahery ravan’ny afo. Tsy fantatra izay antony nahatonga ny firehetana fa ny afo efa nijoalajoala no nahataitra ny mponina teo amin’ity fokontany ity. Voalaza kosa fa niainga avy ao amin’ny tokantrano iray ny afo ka niitatra tamin’ireo […]
Ampidirin’ny mpikarakara, avoakan’ny mpandoadoaka…
Par Taratra sur 07/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Malaza ny hoe miditra amin’ny makarakara, mivoaka amin’ny kiloadoaka. Tsy inona fa ny vola na ny harena azo amin’ny tsy marina, lanilany foana amin’ny tsy antony. Fa misy ny manao izay ho fomba fiaina, na fomba fiasa aza. Rehefa lalovan’ny vola aman-karena, hono, dia izay. Ny herimpo, fanary; ny vola, fitady. Izay no itenenana eto […]
Fitakiana fitsaram-bahoaka tany Mampikony : nodorana sy norobain’ny olona ny tranon’ny zandary
Par Taratra sur 07/11/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Niafara tamin’ny fandorana sy fandrobana ny tranon’ny zandary, fahamaizana fiarakodia sy kamiao iray, ary faharatrana olona 4 ny savorovoro nitakian’ny mponina fitsaram-bahoaka tany Mampikony, ny asabotsy teo. Mihatra any an-toerana ny ”couvre feu”. Notafihan’ny andian’olona marobe ny borigadin’ny zandary ao Mampikony, ny asabotsy tolakandro teo tamin’ny 1 ora sy 45 mn rehefa tsy nety […]
Antanimora – Androy : olona efatra maty voatifitry ny Kalony
Par Taratra sur 07/11/2016 Divers, NS Malagasy
Maty notifirin’ny Kalony tao Antanimora, faritra Androy, ny zoma teo ireo efatra nentina saika hanaovana fanadihadiana tao amin’ny borigadin’ny zandary ao Antanimora. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, nahazo didy hitondra olona efatra avy Ankorify, fokontany Ikonda distrika Antanimora izay voarohirohy tamina asan-jiolahy, ny volana oktobra 2014, avy amin’ny fitsarana ao Androy ny borigadin’ny […]
Golf – «Mada 2016» : tompondaka i Luc sy Hanitra
Par Taratra sur 05/11/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Ratsimbazafy Luc sy Hanitra vadiny no nandrombaka ny andiany voalohany amin’ny tompondakan’i Madagasikara, taranja golf. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Green d’Azura Golf Resort and SPA, Foulpointe. Izy ireo no voalohany teo amin’ny sokajy “Pro” lahy sy vavy. Nisongadina tamin’ireo mpilalao miisa 106 ny zava-bitan’izy ireo. Isa 162 no azon’i Luc, taorian’ny roa andro nifaninanana. […]
Kitra – «Telma coupe de Madagascar» : hiaro ny anaram-boninahiny ny Cnaps Sport
Hitana ny sain’ny maro, amin’izao faran’ny herinandro izao ny lalao ankatoky ny famaranana, amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, tohanan’ny Telma. Ekipa efatra no hifampitady amin’izany. Hifantoka any amin’ny kianja Rabemananjara avokoa ny mason’ny rehetra, indrindra fa ny mpitia ny baolina kitra. Ho fantatra amin’ity asabotsy ity mantsy ny ekipa voalohany tafita amin’ny famaranana, amin’ny […]
Tsipy kanetibe – «Mondial 2016» : hosedrain’ireo efa tompondaka ny ekipa nasionaly
Hisy ny “tournoi grand défi”, taranja tsipy kanetibe atao amin’ity asabotsy ity ary hitohy rahampitso alahady. Fihaonana handraisan’ireo mpilalao enina mirahalahy, ao anaty ekipam-pirenena anjara. Fotoana hisedrana azy ireo, amin’ireo mpilalao efa nandrombaka ny tompondaka eran-tany sy ny tompondakan’i Afrika ary ireo nahazo ny “Masters” sy ny “La Marseillaise”. Hangotraka tokoa izany ity fihaonana ity? […]
Depiote R. Vaonalaroy : « Mila miezaka isika »
Par Taratra sur 05/11/2016 Economie, NS Malagasy
Tsiahivina ny fisian’ny doro tanety nahatsiravina nitranga tany amin’ny kaominina iray ao anatin’ny distrikan’i Brickaville, ny alahady 30 oktobra teo, ka tsy maty ny afo raha tsy ny talata 1 novambra. Loza naharava tanàna, trano sekoly, fasana, toeram-pivarotana, sns. Hatrany amin’ny 60 ha ny fihanak’io afo io. Manoloana izany, nanao antso avo amin’ireo mponina ny […]
Harena an-kibon’ny tany : hotantanan’ny CTD ny tamberim-bidy
Par Taratra sur 05/11/2016 Divers, NS Malagasy
Natao, omaly teto Antananarivo, ny atrikasa mikasika ny “fivoriambe hitantanana ny tamberim-bidy avy amin’ny harena an-kibon’ny tany”. Tanjona ny hijerena ny fomba hitantanana ity karazana tamberim-bidy ity hifanandrify amin’ny filàn’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (CTD). Maro tamin’ireo mpivory ny nisafidy ny hitantanan’ny rafitra eo anivon’ny CTD isan-toerana, mikasika ny fampiasam-bola sy ny fampitaovana, mifanandrify amin’ny fahaleovantena ara-bolan’ny […]
Nandritra ny iray volana : 3.000 ireo tonga nangataka fahazoan-dalana hanorina
Par Taratra sur 05/11/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nahasarika olona ny hetsika iray volan’ny fampanarahan-dalàna ny fanorenana nataon’ny kaominina. 3.000 ireo antontan-taratasy voaray sy hodinihina. Hiditra amin’ny fanasaziana amin’izany ny kaominina manomboka eto. Nifarana omaly ny hetsika fanentanana nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra hampanarahan-dalana ireo izay nanao fanorenana rehetra teto amin’ny tanànan’Antananarivo. Nahatratra 3.000 ireo antontan-taratasy voaray sy hokarakaraina ary hahazo fahazoan-dalana sy ho […]
CUA : raikitra ny iray volan’ny hetra
Manomboka ny talata 8 novambra hatramin’ny zoma 9 desambra ny iray volan’ny hetra izay hanentanan’ny kaominina Antananarivo ny mponina rehetra handoa hetra. Horaisin’ny tompon’andraikitra manokana misahana ny hetra ao ambany rihana varavarana faha-5 ireo rehetra tonga mandoa hetra mandritra io iray volana io. Tsy misy ny fandoavana sazy ho an’ireo izay tara nandoa hetra. Izay […]
Mahajanga : nofanina hahaleo tena ny tovovavy sady reny 20
Anisan’ny tranga mahazo vahana ao Mahajanga ny tanora zazavavy mbola tsy ampy taona nefa manan-janaka sahady. Ho fanampiana ireo tovovavy iharan’izany, nametraka tetikasa iray antsoina hoe « Envol » ny fikambanana Tsiky izay miasa ao Mahajanga sy La Réunion. Tanjona ny hanampy ireo tovovavy hahaleo tena ara-bola mba ho afaka hikarakara ny zanany. 20 ireo tovovavy nefa […]
Manakaiky ny frankôfônia : arahi-maso akaiky ny fahadiovan’ireo tanàna lalovan’ny vahiny
Tafiditra ao anatin’ny laharam-pahamehan’ireo kaominina maromaro lalovan’ireo vahiny mandritra ny fihaonambe an-tampon’ny frankôfônia ny fanamboarana ny zaridaina sy ny fotodrafitrasa manamorona ny arabe. Arahin’ny fanjakana maso akaiky ireny kaominina ireny ary mahazo fanamarihana hatrany rehetra hita ho misy tsy fahatomombanana ny hakanton’ny tanàna. Handaniana vola manokana mihitsy ny vidin’ny voninkazo maro karazana handravahana ny tanàna. […]
Nohafainganina ny fikarakarana : handray karama amin’ny novambra ny mpampianatra vaovao
Hahazo ny karama voalohany ny volana novambra ho avy izao ny mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana farany teo izay nandray ny asa ho an’ny taom-pianarana 2016-2017.Teo aloha, telo volana aty aoriana vao misitraka ny karama voalohany ny mpampianatra. Amin’izao fotoana izao, efa nohafainganina ny fomba fiasa ary nohamaivanina ny fanaovana ny antontan-taratasy rehetra, hoy ny tale […]
Fanadiovana : tsentsin’ny fako ny lakandrano, manadio ny kaominina
Mitohy ny fanadiovana faobe ataon’ny tanànan’Anatananarivo hanatsarana ny tanàna sy hitandroana ny fahadiovana. Ho an’ny boriborintany fahefatra, nofaranana tamin’ny fanadiovana ny faritra Mahamasina ny asa. Raha ny lamina, mihazo ny boriborintany voalohany indray ny fanadiovana ankehitriny. Natomboka teny 67 ha ( eo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be 3 ) ka mipaka eny Andohatapenaka ny fanadiovana. Nitohy teny […]
Tale jeneralin’ny Bianco : “Mila finiavana politikan’ny mpitondra ny ady amin’ny kolikoly”
Par Taratra sur 05/11/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mby aiza ny ady amin’ny kolikoly? Tsy ahitam-bokatra mivaingana. Mila finiavana politikan’ny mpitondra fanjakana, raha ny fijerin’ny Bianco. “Mila fahatapahan-kevitry ny olon-drehetra ny ady amin’ny kolikoly, indrindra ny mpitondra fanjakana sy ny tomponandraiki-panjakana rehetra. Mila fahatapahan-kevitra io: na ny olom-pirenena, na ny mpiasam-panjakana rehetra. Izay no atao hoe finiavana politika.” Io ny nambaran’ny tale jeneralin’ny […]
Praiminisitra Mahafaly S. : “Hitondra tombontsoa ho antsika ny Frankofonia”
“Tsy fotoana izao hilazana fa tsy misy tombotsoa ho azon’i Madagasikara amin’ny fandraisana ny fihaonana rehetra, na ny filoham-panjakana sy ny delegasiona miaraka aminy aza resy lahatra fa manan-karena vokatra isika ary tokony hiaraha-kiasa”, hoy ny Praiminisitra Mahafaly, teny Ambohitseheno, afakomaly. Efa natsidiny sahady koa fa hisongadina amin’ny herinandro ho avy io ny dinika politika, […]
Nifindra eny Mahamasina ny DRH : 100 000 ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena
« Ho haingana kokoa ny fikarakarana ny antontan-taratasy ho an’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena rehetra manomboka izao satria nafindra toerana eny amin’ny INFP Mahamasina ny birao vaovao misahana izany miaraka amin’ny sampandraharaha momba ny mpiasa », hoy ny tale misahana ny fitantanana ny mpiasa, Rabeandalana Sandrot, omaly teny Mahamasina. Vita amin’ny toerana iray ny sonia sy ny fikirakirana […]
Simon Pierre : “Tokana ny Arema…”
“Tokana ny Arema, nanomboka tamin’ny kongresy tamin’ny jona 2013. Atambatra ny hery”, hoy ny sekretera nasionaly, Simon Pierre, omaly tao Fiaranantsoa, amin’izao faha-40 taon’ity antoko naorin’i Deba ity. Notsiahiviny fa tsy nisy ny fanondranana an-tsokosoko andramena izany nandritry ny 21 taona nitondran’ny Arema. Efa vory lanona any an-toerana ireo mpikatroka ka nizara vaomiera efatra : […]
Fikambanana Affami : nivoaka ny gazety Arindra
Niampy iray indray. Nampahafantarina, omaly tetsy 67 ha, ny fivoahan’ny gazety Arindra, tantanan’ny ONG Affami. Hivoaka isam-bolana izy io ary natao ho takatry ny rehetra. « Hampiavaka azy ity ny fivoizana ny fanabeazana sy ny fitaizana ary hampitana hafatra ho an’ny vahoaka. Eo koa ny fampahafantarana ny zon’olombelona sy ny lalàna. Hibahan-toerana ny sosialim-bahoaka… Fa eo […]
La Réunion-Mayotte : miombon’antoka ny Axian sy ny Free
Manitatra ny ambaindainy aty amin’ny ranomasimbe Indianina, ny orinasa frantsay, Free, anisan’ny sangany eo amin’ny fifandraisan-davitra sy ny lafiny finday. Tsy mandeha irery izy, fa miara-miombon’antoka amin’ny orinasa eo an-toerana, ka anisan’izany ny atsy La Réunion sy Mayotte. Orinasa azony antoka hiara-miasa ny Axian, tantanin’ny mpandraharaha malagasy-frantsay, i Hassanein Hiridjee, tompon’ny orinasa Telma eto Madagasikara […]
FJKM Ambohimamory Malala Orimbato : hanampy amin’ny fananganana ny Kolejy Teolojika
« Voka-dehibe famaranan-taona », ho mariky ny fanoloran-tena. Hametrahana sahady eo ambany fahasoavan’Andriamanitra ny taona vaovao 2017. Rahampitso manomboka amin’ny 8 ora maraina, fanompoam-pivavahana faranana amin’ny fanasan’ny Tompo. Manao antso ny amin’ny fanatrehana sy fanatanterahana ireo ny FJKM Ambohimamory Malala Orimbato. Anisan’ny antony lehibe hanaovana izany ny fanampiana amin’ny fananganana ny trano vaovao ho fanampin’izay efa misy […]
Vakoka sy ny hasiny : tsaroana etsy amin’ny IKM ny fahamaizan’ny Rova
Par Taratra sur 05/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
21 taona aty aoriana, manatontosa hetsika ahatsiarovana ny nahamay ny Rovan’Antananarivo ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola. Fampirantiana, velakevitra, fifaninanana tononkalo sy sary (sary atao tanana sy saripika), rindran-kira. Ireo no mandrafitra ny fandaharam-potoana mandritra ny telo andro, nanomboka omaly. Anisan’ny nanatontosana ity hetsika ity ny fahatsapana fa « mihen-danja ny fahatsapan’ny Malagasy ny vakoka sy […]
Ambohimitsinjo : raim-pianakaviana namono nahafaty an-janany
Habibiana! Izay no azo ilazana ny fihetsika feno habibiana nataon’ity raim-pianakaviana 50 taona nahavita namono nahafaty an-janany, ny alarobia teo tao Ambohimitsinjo, kaominina ambanivohitra Antsirabe Avaratra, distrika Vohémar. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, vao herintaona sy tapany ity ankizikely niharam-boina ity. Voalaza fa mifoka zava-mahadomelina ity raim-pianakaviana ity ka rehefa mihetsika ny hadalany, […]
“Frankofonia” : ben’ny Tanàna Randriamifidimanana Ntsoa
Voatendry ho ben’ny Tanàna ny “Tanànan’ny Frankofonia” eny Andohatapenaka i Randriamifidimanana Ntsoa. Hitantana ny fandaminana sy ny fikarakarana samihafa eny an-toerana, mandritra ny fotoana handraisantsika ity fivoriambe iraisam-pirenena ity izy. Nambarany fa maro ny hetsika ho hita manomboka ny 21-27 novambra 2016 eny Andohatapenaka. Miisa 208 ny tranoheva, ahitana ny masoivohon’ireo firenena mandray anjara amin’ny […]
« Précédent 1 … 843 844 845 846 847 … 1 114 Suivant »